Hazvisi Kuwana Nyore Kune Vashambadzi | Martech Zone
Hazvisi Kuitira Nyore Vashambadziri
China, Kukadzi 5, 2009 China, Kukadzi 9, 2017 Douglas Karr
Chinokosha kune akawanda ma link andinogovana uye zvinyorwa zvandinonyora pane ino blog ndizvo kushandisa michina. Chikonzero chacho chiri nyore… pane imwe nguva, vatengesi vaigona kuzungunusa vatengi nechiratidzo, logo, jingle uye mamwe mapakeji akanaka (ndinobvuma kuti Apple ichiri huru pane izvi).
Masvikiro aive eunion-akanangana. Mune mamwe mazwi, Vatengesi vaigona kutaura nyaya uye vatengi kana B2B vatengi vaifanira kuigamuchira… zvisinei nekuti yaive yechokwadi sei. Vashambadziri vaive nemikana mitatu yeterevhizheni yenyika, redhiyo yemuno, pepanhau, zvikwangwani, misangano, iwo (epakutanga) Mapeji eYellow, kuburitswa kwemapepanhau uye tsamba yakananga. Hupenyu hwaive hwakareruka.
Iye zvino tava nemazana ematanera emuno uye epasirese terevhizheni, yemuno uye satellite satellite, mapepanhau, tsamba dzakananga, email, mawebhusaiti -style mawebhusaiti, mablog, mashoma masocial network, akawanda mainjini ekutsvaga, asingaverengeki masocial bookmarking mawebhusaiti, madiki-mablog. RSS feeds, madhairekitori ewebhu, zvikwangwani, mapepa anoburitswa, mapepa ekushandisa, zvipupuriro zvevatengi, mabhuku, misangano, kushambadzira kwemamuvhi, telemarketing, mini-misangano, boka reMapeji akasiana-siyana, tsamba dzakananga, mapepanhau emahara, kushambadzira nhare, kubhadhara -per--kushambadzira kushambadzira, kushambadzira kwemabhanhire, kushambadzira kwakabatana, mawadhiji, kushambadza mutambo wevhidhiyo, kushambadzira vhidhiyo, kushambadzira kwehutachiona, hunhu hwekutarisa, kutarisisa kwenzvimbo, kushambadzira kwedhatabhesi, zvirongwa zvekutumira, mukurumbira manejimendi, zvemukati-zvinogadzirwa nevashandisi, ratings, wongororo… inoenderera mberi nekuenderera mberi nekuenderera ... uye inokura zuva nezuva.
Nehurombo, madhipatimendi Ekushambadzira haana kukura neakakura mukaha wemasvikiro, ivo vatodzikira. Zvakare, iyo kosi yezvidzidzo yeavhareji Kushambadzira mudzidzi makore kumashure kumashure kwatinoda kuti vave. Ini handigone kubatsira asi kushamisika kuti ziso rakashama sei wepakati kushambadzira wepamberi anofanira kunge ari pavanopedzisira vapinda musuo!
Vatengesi Vanoda Rubatsiro
Panguva imwecheteyo, iyo Internet - aka Iyo Ruzivo Superhighway -, ine mubairo usingaperi wemafungiro uye zviwanikwa kune chero munhu anofarira kusefa. Dambudziko nderekuti maonero haaperi - uye mazhinji acho haashande zvakanaka.
Izvo hazvisi kuve nyore kune Vatengesi, saka ivo vari kugara vachitsvaga rubatsiro. Asi rubatsiro haruwanzovatungamira munzira kwayo.
We chikoro chekare vashambadzi vakadzidza kuyedza, kuyera, kuyera uye kuyera zvakare kukoshesa mishandirapamwe yedu uye kushandisa masimba esimbi yega yega vachiwona kuti kudzoka kwekudyara kwaigaro tsigirwa. Takadzidza maitiro ekugadzirisa kuti uwedzere huwandu hwe makiyi takava nevatengi uye tarisiro tichidzikisa zviwanikwa zvese zvinodiwa. Isu takadzidza kupatsanura chiratidzo kubva kuruzha, kuverenga nemaitiro anoshanda, uye kudzidza nekukurumidza uye zvine hasha.
Pane kukakavara kuri kuitika izvozvi pakati pevanofungidzira vechidiki kushambadzira vanopa mazano veInternet uye vane hunyanzvi vekare bhizinesi nyanzvi, zvakadaro. Isu takaverenga hype sepakati nepakati svika pamusika wemakore makumi maviri apfuura. Tsvaga iwe wega nyanzvi anga apfuura izvi uye anoziva maitiro emamiriro ekunze.
Bhizinesi rako rinoenderana neavo vaunovimba navo! Ita shuwa kuti avo vaunovimba navo vane ruzivo rwakakosha kuti vafambe kuburikidza nepfungwa uye usvike kune izvo zvinofambisa bhizinesi rako.
Tags: boka reMapeji eYero akasiyanaaffiliate advertisingbanner advertisinghunhu hunonongedzabhokisivanyorabhurocha-dhizaini mawebhusaitizvisingaverengeki zvemagariro ekubhukumaka masaitivatengi zvipupurirodatabase yekushambadziramail yakanangaemapepanhau emaharanzvimbo yakanangwayemuno uye satellite redhiyoKushambadzira MabhukuKushambadzira Misanganomicro-mablogmini-misanganomobile marketingbhaisikopo yemitambo kushambadzirainjini dzekutsvaga dzakawandaterevhizheni yenyikaMapepanhaukubhadhara pakushambadzira kushambadzazvinyorwa zvitsvaratingszvirongwa zvekutumiramukurumbira manejimendiReviewsrss feedstelemarketingmapfumo pasocial networkshandisa matambudzikomushandisi akagadzira zvemukativhidhiyo yemitambo kushambadziravhidhiyo kushambadzirahutachiona hwekutengesamadhairekitori ewebhuvarunguWidgets
Kudya Yako Yega Imbwa Yekudya
Feb 6, 2009 at 11:14 PM
Unotaura chokwadi. Pandakanga ndapfugama mukati medhigirii yangu tenzi, ndakadzidza nekukasira kuti dhipatimendi raive riri mukusaziva kwavo kwekuti ndeapi maturusi enhau ekuti titaure meseji yedu. Sahunyanzvi hwekudyidzana neruzhinji, ndinoona zvakaoma kuti ndirambe ndichienderana neetekinoroji.
Asi kana paine chinhu chimwe chandakadzidza. Izvo zvakakosha ndezvekudzidza maitiro. Tarisa uone zviri kushandiswa nevanhu kutaura uye zvavasiri kushandisa. Ehezve, izvo zvinowedzera kuomarara kana isu tikatanga kukamura vateereri.
Mukupedzisira, ndinofunga izvo zvinoshandisa vanhu kutaurirana hazvina kukosha pane meseji iri kutaurwa. Kana iyo meseji iri yakapusa, inoshamisa, inovimbika, kongiri, inobata manzwiro uye ichitaura nyaya, saka izvo zvinounza kudzoka kuri nani mukudyara, iyo inofanirwa kuyerwa mumadhora nemasendi, asi zvakare nekuti hukama huri kuvakwa nekuchengetedzwa sei.